Allegri oo markale qol madoow ku xiray Dybala iyo Ronaldo oo isku diyaarinaya in uu dhaliyo Goolkiisii Koobaad+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Allegri oo markale qol madoow ku xiray Dybala iyo Ronaldo oo isku diyaarinaya in uu dhaliyo Goolkiisii Koobaad+Sawiro
(14-9-2018) Sida ay sheegayaan Warar lagu kasoonaan karo Macalinka Juventus Max Allegri ayaa markale shaxdiisa koobaad ka saaray Cayaaryahanka dalka Argentina ee Paulo Dybala kaas oo aan lagu darin Cayaartoyda ku soo bilaaban doonta kulanka Sassuolo Axada.
SportMediaset ayaa daabacay in Paulo Dybala uusan ku soo bilaaban doonin kulanka Axada isla Markaana macalin Max Allegri uu markale is ticmaali doono shaxda 4-3-3 shaxdaas oo uusan soo geli doonin Bybala.
Juventus ayaa waxaa afka hore uga Cayaari doona Bernardeschi, Mandzukic iyo Ronaldo. halkaa oo uusan boos ka heli doonin Paulo Dybala kaas oo lasheegay in bisha Janaayo ka dhaqaajin doono Juventus.
Dhanka kale Cristiano Ronaldo ayaa doonaya in uu dhaliyo Axada Goolkiisii koobaad ee Horyaalka Talyaaniga kadib markii uu ku hungoobey 3 dii kulan ee uu dheeley waxaana uu ka dhex muuqdey Tababarka Naadigiisa.